शिक्षा:, कलेज र विश्वविद्यालयहरू
शैक्षिक गतिविधि व्यक्तिको व्यक्तित्व र आत्म-जागरूकताको विकासमा शैक्षिक संस्थाहरूको गतिविधिको रूप हो। शिक्षा कुनै व्यक्तिको दैनिक जीवनको अभिन्न भाग हुनुपर्छ। यो आवश्यक छैन कि यो समाजमा सह-अवस्थित सजिलो बनाउन (यद्यपि यो पहल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ), तर यो जीवनमा व्यक्तिको आत्म-निर्धारणको लागि पनि। शैक्षिक गतिविधिहरू संकेत हुन्। सच्चाइको वा सत्यताको कसैलाई समझाउने सबैभन्दा उत्तम तरिका एक वास्तविक जीवन उदाहरणको नेतृत्व गर्न हो।
शैक्षिक गतिविधिहरू - बच्चाहरू, किशोरहरू, शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थीहरू प्रबन्ध गर्ने उपकरणहरू मध्ये एक। यो Kindergartens, विद्यालयहरु, उच्च र माध्यमिक शैक्षिक संस्थानहरुको लागि सबै भन्दा सामान्य घटना हो। यस प्रकृतिको कुनै पनि घटनाले उद्देश्य राख्नु पर्छ, आचरण र नामको रूप निर्धारण गर्नुहोस्। यसले उमेरको श्रेणी र शिक्षक र पढाइको तैयारता स्तरमा लिनु पर्छ। शैक्षिक गतिविधि नागरिक-देशभक्त हुन सक्छ, शारीरिक, सौंदर्य, नैतिक, पारिस्थितिक, पारिवारिक, धार्मिक, धार्मिक, आर्थिक, कानूनी प्रकृति। साथै यस्ता प्रक्रियाहरूको ढाँचामा, राष्ट्रिय शिक्षा सञ्चालन गरिन्छ। उदाहरणका लागि, आफ्नो नागरिक-राष्ट्रपतीय भावना बढाउन र विश्व इतिहासको घटनाहरूको महत्त्व बुझ्न, महान देशभरी युद्धको दिग्गजका साथ बैठकहरू सैन्य विषयवस्तुमा कन्जर्ट कार्यक्रम प्रदर्शन गरिन्छ। नैतिक र सौंदर्य आत्म जागरूकता बढाउन, कला दीर्घाओंका भ्रमणहरू, संग्रहालयहरू (ऐतिहासिक, पुरातात्विक, विषयगत, आदि) व्यवस्थित गरिन्छ, साहित्यिक शामहरू आयोजित छन्। मानव, नैतिक विकासको विषय, आर्थिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक योजनामा यथार्थवादको विषयमा कुराकानीहरू धेरै उपयोगी छन्। यी सबै घटनाहरूले व्यक्तिलाई यो वा त्यो दृष्टिकोण लिन मद्दत गर्दछ, आफैलाई प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्दछ (जुन, कहिलेकाहीं, र वयस्कका लागि, स्थापित व्यक्तित्व गाह्रो हुन्छ)।
शैक्षिक गतिविधि "स्वस्थ जीवनशैली" व्यक्तिको शारीरिक र मनोवैज्ञानिक-भौतिक गुणहरूको शिक्षाको रूप हो । मानसिक र मनोवैज्ञानिक विकाससँग नजिकको सम्बन्धमा भौतिक विज्ञान शिक्षा हो। शारीरिक गतिविधिको उचित वितरण मस्तिष्क गतिविधि, मानसिक विकासको लागि उत्कृष्ट उत्प्रेरक हो। तपाईंको शरीरको साथमा बाँच्नको लागि, तपाईं आफ्नो सम्पूर्ण जीवन खेलहरूमा राख्न र यसलाई व्यावसायिक रूपमा गर्नुपर्दैन, हरेक हप्ता दुई वा तीन प्रशिक्षणहरू पर्याप्त हुनेछन्। र यदि तपाईं बिहानै व्यायाम गर्नुहुन्छ भने, तपाईं कुनै पनि समयमा उच्च स्तरमा आफ्नो नैतिक आत्मालाई कायम राख्न सक्नुहुन्छ।
विद्यार्थीहरूको लागि एक शैक्षिक गतिविधि न केवल प्रभावको रूप हो, तर पनि प्रशिक्षण। यहाँ माथि बढाउने प्रक्रिया पनि विद्यार्थीहरूको व्यक्तित्वको विभिन्न पक्ष विकास गर्न उद्देश्य हुन सक्छ। धेरै विश्वविद्यालयहरू मध्ये निस्सन्देख प्राय: विभिन्न स्वयंसेवक आन्दोलनहरूमा संलग्न छन्। तिनीहरू गरीब, पीडितहरू, पेंशनरहरू, यात्राका अनाथहरू वा अस्पतालहरू, र कला दीर्घाओंहरू व्यवस्थित गर्न वा तिनीहरूलाई सहयोग गर्न सक्छन्।
म संस्थानको डिप्लोमा किन्न चाहन्छु! के शिक्षा शिक्षाहरूको लागि के लागि?
सर्वश्रेष्ठ न्यूयर्क विश्वविद्यालयहरु
सेन्ट-पीटर्सबर्ग राज्य इलेक्ट्रोटेक्निकल विश्वविद्यालय लेईटी: समीक्षाहरू। LETI (SPbGETU): संकायहरु
रूसमा माध्यमिक विशेष शिक्षा
सेंट सेन्ट पीटर्सबर्ग को कृषि विश्वविद्यालय: इतिहास र आधुनिकता
मिश्र र इस्पात को संस्थान: संरचना, विशेषता र समीक्षा
Jellied बीफ पुच्छर: नुस्खा
Artem Mikhalkov: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन र रचनात्मक योजना
"एथेना" - बेलग्रेड क्षेत्र मा छात्रावास: शहरी सुविधा संग सुरक्षित प्राकृतिक क्षेत्रमा बिदा!
Rhapsody - प्राचीन परम्परा को एक निरंतरता। सहायक संगीत को विधा को परिवर्तन
विवाह कहाँ मनाउन: व्यवसायीक मा निर्भर
निविदाहरु मा सहभागिता: चरण निर्देशनहरूको, आवश्यक कागजात, अवस्था द्वारा चरण
Batumi वनस्पति उद्यान। हरियो केप